Dhamaystirka golayaasha maamulka Azaniya oo ka socda Kenya iyo dawladda martida loo yahay oo taageero wayn u fidaysay maamulkaas. – Radio Daljir
Garowe, July 27 – Golayaasha maamulka Azania ayaa shir xasaasi ah u ku leh magaalada Lamura ee duleedka Nairboi. Shirkan ayaa waxa maamulka sare ku weheliya madax ka tirsan dalka Kenya iyo siyaasiyiin ka soo jeeda degaannada hoos-yimaada maamulka Azania.
Shirkan ayaa lagu wadaa in lagu dhiso golaha xukuumadda ee maamulka Azania oo oo sannadkan biloowgiisii lagu dhisay dalka Kenya. Madaxwaynaha maamulka Azania Prof. Maxamed Cabdi Gaandi ayaa sheegay in uu soo dhisi doono maamul tayo leh oo ka kala imaanaya qaybaha bulshada ee gobollada ku midoobay maamulkan. Azania waxa uu mideeyaa gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. Si kasbata ha ahaatee maamulku waxa uu ka dhisan yahay dalka Kenaya, gobollada uu sheegtay in uu ka talinaya waxa intooda badan gacanta ku haya kooxda Al-shabab, Ahlu-Sunnah iyo dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya.
Maamulkan ayaa waxa si wayn u taageera dawladda Kenya, waxana haatan shirkooda ku weheliya guddoomiyaha baramaanka Kenya Faarax Macallin iyo wasiirka arrimaha dibadda Kenya.
Mudane Faarax Macallin oo isagu halkaa ka hadlay ayaa maamulka Azania ugu yaboohay taageero siyaasadeed iyo mid millatari, waxana uu ku dhiiri-galiyay siyaasiyiinta iyo maamulka Azania in ayan fashilin oo ayan la mid noqon maamullada laga dhiso Soomaaliya misana iska baa ba’a.
Dawladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa iyadu si wayn uga soo horjeeda jiritaanka maamulkaas. Waxaa xusid mudan in madaxwayne Shariif Sh. Axmed iyo Madaxwaynaha maamulka Azania ay si wayn isugu dhawaayeen xilligii uu sida wayn u shaqayn jiray ururukii Dib-u-Xoraynta Soomaaliya ee dagaalka kula jiray dawaladdii madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Abdullaahi Yuusuf Axmed iyo ciidamadii Itoobiya ee taageeri jiray.
Xaliima Cabdullahi Cali,